မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းဖြင့် Vernee X ကိုရယူပါ။ | Androidsis
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းဖြင့် Vernee X ကိုရယူပါ။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမှ Vernee မှသူမ၏နောက်ဆုံးထုတ်မော်ဒယ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာ Vernee အကြောင်းပါ X, ရှစ် core Core Mediatek Helio P23 ပရိုဆက်ဆာဖြင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်သို့မဟုတ် FullView ရှိသည့်ယနေ့အထိပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
ဒီစမတ်ဖုန်းကို GearBest မှာမလွဲမရှောင်သာကမ်းလှမ်းပါတယ် ဘယ်ဟာကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပြောလိမ့်မယ်, ငါတို့ထောက်ပြလိမ့်မည်ဟုအများအပြားအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များပေါင်းစပ်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား
ဒီစမတ်ဖုန်းဟာအရင်တုန်းကပြောခဲ့သလိုပါပဲ, အလှည့်၌အလှည့်, ကင်မရာလေးခုရှိခြင်းအပြင်: နောက်ကျောနှစ်ခုနှင့်ရှေ့တွင်နှစ်ခု။
အနောက်ဘက်ကင်မရာကို LED Flash ပါသည့် 16 နှင့်5megapixel sensor များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရှေ့မျက်နှာစာတွင်အကောင်းဆုံး selfies များကိုခံစားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၁၃ နှင့် ၅ megapixel အာရုံခံကိရိယာရှိသည်။
ဒီလှပတဲ့ကိရိယာ ကြီးမားတဲ့ screen ရှိတယ် နေပြည်တော် ၆ လက်မ ၁၈: ၉ FullHD + အကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အတွင်းပိုင်းမှာစွမ်းအားမြင့်ရှစ်ခုရှိတဲ့ Helio P23 ပရိုဆက်ဆာကိုတွေ့ရသည် (4GHz နှုန်းဖြင့် Cortex A53 Core + 2,3GHz အမြန်နှုန်းတွင်4Cortex A53 Core များ)
ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 770Mhz တွင် Mali dual-core GPU ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသော resolution ဖြင့်ဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ပြီး Android 7.0 Nougat ကိုအသုံးပြုထားသည်.
ဒါပေမယ့်မလောက်ငသလိုပဲ ဒီ terminal ကကျောဘက်မှာ fingerprint reader နဲ့ facial recognition system ကိုပါပေါင်းစပ်ထားတယ်.
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Vernee X ဟာအလွန်အကျွံအလွန်များနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၆,၂၀၀mAh ဘက်ထရီဖြင့်မှတ်ချက်ပေးရန်အလွန်နည်းပါးသည်။ အကြောင်းမှာနှစ်ရက်မှသုံးရက်အထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။ Vernee အပေါ် skimp မပြုခဲ့သောအရာတစ်ခုခု။
Vernee X ကိုအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချနေသည်။
ဒီဆိပ်ကမ်းကို gadget နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကိုအာရုံစိုက်သည့်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်သော GearBest တွင်တွေ့နိုင်သည်။
ယခု Vernee X သည်စျေးနှုန်းချိုသာသောဒေါ်လာ ၂၄၉.၉၉ ဖြင့်ကြိုတင်ရောင်းချနေသည်။ ဒီဖုန်းကိုဝယ်ချင်ရင်ထပ်မစဉ်းစားပါနဲ့။ ပြေးပါအချိန်ကန့်သတ်!
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုဒီဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်အထိဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းဖြင့် Vernee X ကိုရယူပါ။
လာမည့် Galaxy S9 + ၏ပထမဆုံး Benchmark ကိုစစ်ထုတ်သည်
Adups မှတရုတ်စပိုင် Spyware ကို Android တွေ့ရှိ